Jimcaha Ma Cayaari Doona Maxamed Saalax? | Raadgoob
Jimcaha Ma Cayaari Doona Maxamed Saalax?
Masawirkan ayey u badan tahay inuu farxad galiyo taageerayaasha Masar ee kooxdoodu cayaari doonto Jimcaha.
Mo Saalax oo dhaawac uu garabka ka soo gaaray cayaartii kama damabaysta ahayd ee horyaallada Yurub ee Real Madrid ay 3-1 uga guulaysatay kooxdiisa Liverpool bishii hore, ayaa la arkay isagoo kooxda dalkiisa tababar kula qaadanaya magaalada Grozny subaxnimadii Arbacada.
Laakin sidaasoo ay tahay, dadka qaba in weeraryahankaas uu garoonka gali doono cayaarta ay la yeelanayaan Uruguay oo ay laba maalmood naga xigto, ayaa waxaa dhici karta inay niyad xumo halkaa ka raacdo.
“Rajo aad u weyn oo xagga dib u soo kabashadiisa ah ayaa jirta, laakin ma jiro go’aan kama dambays ah oo la xiriira inuu ka qayb qaadanayo cayaarta, xaaladiisana maalin-maalin ayaan ula soconaynaa” ayuu yiri dhakhtarka kooxda Ihab Lahita oo la hadlayey warfidiyeenka, sida ay sheegtay wakaaladda AFP.